डेक्सामेथासोन बनाम प्रेडनिसोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट समाचार कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन कम्पनी प्रेस औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> डेक्सामेथासोन बनाम प्रेडनिसोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
डेक्सामेथासोन बनाम प्रेडनिसोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
समाचारहरूमा COVID-19 को साथ, यो स्टेरोइड उपचारको बारेमा तपाईंले सुन्नुभएको हुन सक्छ। वा, यदि तपाईं कहिल्यै आपतकालीन कोठाको बिरामी हुनुहुन्छ भने, यो सम्भव छ कि तपाईंलाई स्टेरोइड्सको उपचार गरिएको छ। स्टेरोइड औषधीहरू आपतकालीन चिकित्सा स्थितिहरूको विभिन्न प्रकारका साथै धेरै अन्य गम्भिर र जीर्ण सूजनको अवस्थाको लागि प्रयोग गरिन्छ। डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोन दुई औषधिहरू हुन् जुन संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छन्।
दुबै औषधिहरू कोर्टिकोस्टेरोइड हो, जसलाई ग्लुकोकोर्टिकोइड्स वा स्टेरोइड पनि भनिन्छ। तिनीहरू धेरै अंग प्रणालीहरूमा भडकाउने अवस्थाको विविधताका लागि प्रयोग गरिन्छ। Corticosteroids ले मेटाबोलिक प्रभावको कारण र उत्तेजनामा ​​शरीरको प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया परिमार्जन द्वारा काम गर्दछ। यद्यपि डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोन दुबै स्टेरोइड हो, तिनीहरूसँग केहि भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल वर्णन गर्नेछौं।
डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोन बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
डेक्सामेथासोन (डेक्सामेथासोन कूपन | डेक्सामेथासोन भनेको के हो?) एक कोर्टिकोस्टेरोइड, वा स्टेरोइड, औषधि हो। जे होस् ब्रान्डको नाम ड्याकाड्रनको रूपमा चिनिन्थ्यो, ब्रान्ड-नाम उत्पादन अब व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध छैन। डेक्सामेथासोन जेनेरिक उत्पादको रूपमा उपलब्ध छ, ट्याब्लेट, इन्जेक्शन, मौखिक समाधान, र नेत्र उत्पादहरूमा। डेक्सामेथासोन एक लामो-अभिनय औषधि को रूप मा परिचित छ। यसको आधा जीवन-36-72२ घण्टा हो।
Prednisone (Prednisone coupons | Prednesone के हो?) एक स्टेरोइड औषधि पनि हो। प्रेडनिसोनको ब्रान्ड नामलाई डेल्टासोन भनिन्छ, तर ब्रान्ड-नाम अब उपलब्ध छैन। प्रेडनिसोन जेनेरिक उत्पाद, ट्याब्लेटको रूपमा, र मौखिक समाधानको रूपमा उपलब्ध छन्। प्रेडनिसोन एक मध्यवर्ती अभिनय औषधि को रूप मा परिचित छ। यसको आधा जीवन लगभग तीन देखि चार घण्टा हो। मौखिक प्रेडनिसोन प्राय: तत्काल रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा सिफारिस गरिन्छ, तर त्यहाँ ढिलाइ-रिलीज प्रेडनिसोन ट्याब्लेट पनि छ रयो भनिन्छ।
डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Corticosteroid (स्टेरोइड), एक glucocorticoid को रूप मा पनि चिनिन्छ Corticosteroid (स्टेरोइड), एक glucocorticoid को रूप मा पनि चिनिन्छ
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति जेनेरिक जेनेरिक, ब्रान्ड (रायोस ढिलाइ-विमोचन ट्याब्लेटहरू)
ब्रान्ड नाम के हो? ड्याकेड्रन (अब व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध छैन) डेल्टासोन (अब व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध छैन),
किरणहरू (ढिलाइ-विमोचन ट्याब्लेटहरू)
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट, इंजेक्शन, मौखिक समाधान, नेत्र आँखाहरू (एक्लै र अन्य सामग्रीको संयोजनमा), नेत्र मलहम (अन्य सामग्रीहरूको संयोजनमा) ट्याब्लेट, मौखिक समाधान
मानक खुराक के हो? संकेत र उपचार द्वारा प्रतिक्रिया द्वारा फरक छ संकेत र उपचार द्वारा प्रतिक्रिया द्वारा फरक छ
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो समय; फरक हुन्छ छोटो समय; केहि बिरामीहरूले प्रिस्क्रिबर्सको हेरचाहमा लामो अवधि लिन्छन्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू, कहिलेकाँही बच्चाहरूमा वयस्कहरू, कहिलेकाँही बच्चाहरूमा
Dexamethasone मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
डेक्सामेथासोन मूल्य अलर्टका लागि साइन अप गर्नुहोस् र मूल्य परिवर्तन भएपछि फेला पार्नुहोस्!
डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोनद्वारा उपचारित सर्तहरू
डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोनसँग समान स .्केतहरू छन्। दुबै औषधीहरू विभिन्न प्रणालीहरूको लागि भड्काउने विभिन्न अवस्थाका लागि बिभिन्न किसिमका प्रयोगका लागि संकेत गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, दुबै औषधीहरू एलर्जीको अवस्थाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब परम्परागत उपचार प्रभावकारी हुँदैन। डेक्समेथासोन र प्रेडनिसोनले उपचार गर्ने एलर्जी र डर्मेटोलोगिक अवस्थाहरूमा दम, एटोपिक वा सम्पर्क डर्माटाइटिस, औषधि अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू, बारहमासी वा मौसमी एलर्जी राइनाइटिस, स्टीभन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम, र सीरम बिरामीको तीव्र तीव्रता समावेश गर्दछ।
किनभने प्रत्येक कोटिमा धेरै सations्केतहरू छन्, त्यहाँ सूची बनाउन अति धेरै छन्। तलको चार्टमा, हामी प्रत्येक कोटीका लागि धेरै उदाहरणहरू सूचीबद्ध गर्दछौं। थप जानकारीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
सर्त डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोन
एलर्जी र dermatologic अवस्था (तीव्र दमा exacerbations, dermatitis, राइनाइटिस) हो हो
एंडोक्राइन डिसअर्डरहरू (एड्रेनोकोर्टिकल अपर्याप्तताaफ्यल्ड्रोकार्टिसोन, कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया जस्ता मिनरलकोर्टिकॉइड ड्रगसँग संयोजनमा) हो हो
जठरांत्र रोग (एन्टरिटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस) हो हो
हेमेटोलॉजी डिसअर्डरहरू (एनिमियाको केहि प्रकारहरू, इडिओपाथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा) हो हो
नियोप्लास्टिक रोग (ल्यूकेमिया, लिम्फोमा) हो हो
स्नायु प्रणाली (बहु sclerosis को तीव्र उत्तेजना, मस्तिष्क edema प्राथमिक वा मेटास्टेटिक मस्तिष्क ट्यूमर, craniotomy, वा टाउको चोट संग सम्बन्धित) हो हो
नेत्र रोग (अस्थायी धमनीशोथ, uveitis) हो हो
रेनल रोगहरू (इडिओपाथिक नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, ल्युपस) हो हो
श्वसन रोग (क्षयरोग वा निमोनिया को केही प्रकार) हो हो
गठिया सम्बन्धी विकारहरू (गठियाको केही प्रकार, लुपस) हो हो
के डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोन अधिक प्रभावकारी छ?
दुई औषधि सिर टाउको देखि तुलना अध्ययन धेरै जसो तीव्र दमा संग साना बच्चाहरु मा डेक्सामेथासोन बनाम प्रेडनीसोन को लागी। एक अध्ययनको समीक्षा दमको तीव्र उत्तेजनाका बच्चाहरूमा डेक्समेथासोन बनाम प्रेडनिसोनलाई हेरे। यो निष्कर्षमा पुग्छ कि प्रमाणले कुनै पनि औषधिको प्रयोगलाई समर्थन गर्दछ। समीक्षाले उल्लेख गर्यो कि डेक्सामेथासोनलाई अझ राम्रोसँग सहन सकिन्छ, तर त्योभन्दा बढी अनुसन्धान आवश्यक छ।
किनकि प्रत्येक औषधि बिभिन्न प्रकारको चिकित्सा अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुन औषधि बढी प्रभावकारी छ भन्ने कुरा भन्न गाह्रो छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले डेक्सामेथासोन छनौट गर्न सक्दछ यदि तपाईंलाई केहि चाहिन्छ जुन लामो-अभिनय र अधिक सामर्थ्यवान छ, वा प्रेडनिसोन यदि तपाईंलाई छोटा-अभिनय गर्ने केही चीज चाहिन्छ भने। तपाईको लागि उत्तम औषधि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ, जसले तपाईको मेडिकल ईतिहास र सर्तहरू, र तपाईले लिने अन्य औषधीहरू ले सम्भावित रूपमा डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोनसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ।
डेक्समेथासोन बनाम प्रेडनिसोनको कभरेज र लागत तुलना
डेक्सामेथासोन सामान्यतया निजी बीमा र मेडिकेयर द्वारा कभर गरिएको छ। 4० mg मिलीग्राम ट्याब्लेटको आउट-अफ-पकेट मूल्य $ or० वा अधिक हुन सक्छ। एकलकेयर कूपनको साथ, यो सहभागी फार्मेसीहरूमा $ १० भन्दा कम छ (ड्याकाड्रन कुपनहरू | डेकाड्रोन विवरणहरू)।
प्रेडनिसोन पनि प्राय: निजी बीमा र मेडिकेयरले कभर गर्दछ। १० २० मिलीग्राम ट्याब्लेटको बाहिरको पकेट मूल्य लगभग $ २० हो। Sing than भन्दा कममा प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्न एकलकेयर कूपन प्रयोग गर्नुहोस्।
कति पटक योजना बी काम गर्दैन
नोट: निदानमा भर पर्दै, चिकित्सा कभरेज भाग बी वा भाग डी अन्तर्गत पर्न सक्छ।
मानक खुराक Mg मिलीग्राम tablets० ट्याब्लेटहरू २० मिलीग्राम १० ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ १ $ ०- $ १
डेक्समेथासोन बनाम प्रेडनीसोनको साझा साइड इफेक्टहरू
जब तपाईलाई स्टेरोइड औषधि दिइन्छ, तपाईले निर्देशन अनुसारको औषधि लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्देशन दिईएको खण्डमा टेपर बनाउनु पर्छ। तल सम्भावित साइड इफेक्टहरूको सूची छ जुन कि त डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोनसँग देखा पर्दछ। यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
प्रणाली डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोनको सम्भावित साइड इफेक्टहरू
एलर्जी एलर्जी प्रतिक्रिया, एनाफिलैक्सिस, एंजियोएडेमा
हृदय कार्डियक अरेस्ट / एरिथमिया, ह्रदयको गतिमा परिवर्तन, रक्तस्राव पतन, हृदय असफलता, उच्च रक्तचाप, सूजन, सिन्कोप, टाचिकार्डिया, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म
dermatologic एक्ने, एलर्जी डर्माटाइटिस, सुख्खा / स्केली छाला, एरिथेमा (रातोपन), बिरामी घाउ निको हुने, पसिना बढाउने, पुराना
अन्तःस्रावी कम कार्बोहाइड्रेट / ग्लूकोज सहिष्णुता, कुशिंगोइड राज्य को विकास, हाइपरग्लिसेमिया (उच्च रक्त शर्करा), hirsutism (अधिक कपालको वृद्धि), मासिक अनियमितता, बाल रोगीहरुमा बृद्धि दमन
फ्लुइड / इलेक्ट्रोलाइट गडबडी कन्जेस्टिभ मुटुको असफलता, तरल पदार्थ प्रतिधारण, पोटेशियम नोक्सान, सोडियम प्रतिधारण
जठरांत्र भोक, मतली, अग्नाशयशोथ, पेप्टिक अल्सर, सानो र ठूलो आन्द्राको छिद्र, अल्सरेटिव एसोफैगिटिस बढेको
Musculoskeletal मांसपेशीहरुको ह्रास, मांसपेशि कमजोरी, अस्थि रोग, लामो हड्डी भंग, कण्डरा फुट्ने, कशेरुका कम्प्रेसन फ्रैक्चर
मस्तिष्क / मनोचिकित्सक आकुंचन, डिप्रेसन, भावनात्मक अस्थिरता, उत्साह, टाउको दुख्ने, पेपिल्डिमा (स्यूडोट्यूमर सेरेब्री) को साथ अन्तर्क्रियासम्बन्धी दबाब बढ्यो सामान्यतया उपचार, अनिद्रा, मूड स्विंग्स, न्यूरोपैथी, प्यारेस्थेसिया, व्यक्तित्व परिवर्तन, भेरिगोको बन्द
नेत्र ग्लाकोमा, मोतियाबिंद, धमिलो दृष्टि
अन्य असामान्य फ्याट डिपोजिट, गर्न को लागी अतिसंवेदनशीलता संक्रामक रोग , हिचकी, चन्द्र अनुहार, वजन
स्रोत: डेलीमेड ( डेक्सामेथासोन ), डेलीमेड ( प्रेडनिसोन )
डेक्सामेथासोन बनाम प्रेडनीसोनको ड्रग अन्तरक्रिया
एन्टिकोआगुलेन्ट लिने बिरामीहरू, जस्तै वारफेरिन, एक स्टेरोइड औषधि लिने बेलामा निगरानी गरिनु पर्छ। मधुमेहका लागि प्रयोग गरिएका औषधीहरू समायोजित गर्न आवश्यक पर्न सक्छ किनभने स्टेरोइडले रगत ग्लुकोजको स्तरलाई असर गर्न सक्छ। केहि औषधिहरू जुन CYP3A4 भनिने एन्जाइमले मेटाबोलिज गरिन्छ स्टेरोइडको मेटाबोलिज्मलाई असर गर्न सक्छ, खुराक समायोजनको आवश्यकता छ। यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोन
पिओग्लिटाजोन एन्टिडायबेटिक एजेन्टहरू हो हो
केटोकोनाजोल CYP3A4 एंजाइम इनहिबिटरहरू हो हो
डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोनको चेतावनी
डेक्समेथासोन वा प्रेडनिसोनको साथ कोर्टिकोस्टेरोइड उपचारको चेतावनी:
बिरलै, एक एलर्जी वा anaphylactic प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यदि यस्तो हुन्छ भने आपतकालीन चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोनको प्रयोगले रक्तचाप बढाउन सक्छ, सोडियम र पानी रोक्छ, र पोटेशियम गुम्न सक्छ। स्टेरोइडहरू हृदय विफलता, उच्च रक्तचाप, र / वा मिर्गौला समस्या भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
स्टेरोइडले क्याल्सियम घाटा निम्त्याउन सक्छ। यसले कुनै पनि उमेरमा बच्चाहरू र अस्टियोपोरोसिसमा धीमा विकास निम्त्याउन सक्छ। सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यहाँ स्टेरॉयड प्रयोग र बायाँ निलय फ्री पर्खाल भत्काउन बीच एक सम्बन्ध छ भर्खरको मायोकार्डियल इन्फेक्शन पछि। यी बिरामीहरूमा स्टेरोइडहरू त्याग्न वा चरम सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
स्टेरोइड्सले उपचार पछि सम्भावित ग्लुकोकोर्टिकोस्टेरॉइड अपर्याप्तताको साथ उल्टो हाइपोथैलेमिक-पिट्युटरी-एड्रेनल (HPA) अक्ष दमन, वा एड्रेनल अपर्याप्तता पैदा गर्न सक्छ। स्टेरोइडको विच्छेदन पछि महिनौंसम्म जारी रहन सक्ने Adrenocortical अपर्याप्तता, हुन सक्छ यदि स्टेरोइडहरू चाँडै रोक्दछ भने। स्टेरोइड औषधीलाई बिस्तारै टेपरिंग गरेर जोखिम कम गर्न सकिन्छ। साथै, सबैभन्दा कम सम्भावित खुराक प्रयोग गर्नुपर्दछ।
किनभने स्टेरोइडहरूले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउँछन्, स्टेरोइडको उपचारमा लिइरहेका बिरामीहरू संक्रमणको लागि बढी सम्भावित हुन्छन्, विशेष गरी स्टेरोइडको अधिक मात्राको साथ। स्टेरोइडले प्रणालीगत फ fun्गल संक्रमणलाई बढावा दिन सक्छ र यदि यी जीवनमा घातक औषधि प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्दैन भने यी केसहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
स्टेरोइड लिने बिरामीहरूमा चिकनप्याक्स र दादुरा बढी गम्भीर वा घातक पनि हुन सक्छ, एक दबाइएको प्रतिरक्षा प्रणालीको कारण। चिकनप्याक्स र दादुराको जोखिमलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। यदि तपाइँ खुलासा हुनुहुन्छ भने, तुरून्त मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस्।
स्टेरोइडको इम्युनोस्पप्रेसिभ डोज प्राप्त गर्ने बिरामीहरूले प्रत्यक्ष खोप प्राप्त गर्नु हुँदैन।
स्टेरोइडको कारण अन्तर्अभावी दबाव, मोतियाबिंद, जलबिन्दु, र / वा आँखा संक्रमण हुन सक्छ। बिरामीहरू जसले आँखाका लक्षणहरू विकास गर्दछ, वा जसले six हप्ता भन्दा बढीको लागि स्टेरोइडहरू प्रयोग गर्दछ, नेत्र रोग विशेषज्ञलाई भेट्नु पर्छ। मौखिक स्टेरोइड अप्टिक न्यूरोइटिस वा सक्रिय अक्टुलर हर्पेस सिम्प्लेक्सको उपचारको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवस्था र / वा कलेजो समस्या भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ स्टेरोइडको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
स्टेरोइड्स मूड परिवर्तन, व्यक्तित्व परिवर्तन, अनिद्रा, वा मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति को कारण हुन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरून्त परामर्श लिनुहोस् यदि तपाईंले मुड वा व्यवहारमा कुनै परिवर्तन देख्नुभयो भने।
तपाईंको कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापीको लागि डोजि tap र टेपरिंग तालिका अनुसरण गर्नुहोस्। अचानक वा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सुपरिवेक्षण बिना स्टेरोइडहरू बन्द नगर्नुहोस्।
गर्भावस्थामा स्टेरोइड प्रयोग गर्नाले बच्चालाई फाटो तालु वा समस्या बढ्न / वजन बढाउन सक्छ। स्टेरोइड्स मात्र गर्भावस्था मा प्रयोग गरिनु पर्छ यदि लाभ जोखिम को पछाडि। यदि तपाईं पहिले नै स्टेरोइड औषधि लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
डेक्सामेथासोन बनाम प्रेडनीसोनको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
डेक्सामेथासोन भनेको के हो?
डेक्सामेथासोन एक स्टेरोइड औषधि हो जुन विभिन्न प्रकारको भडकाउने अवस्थाहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ।
डेक्सामेथासोन जस्तै, प्रेडनिसोन एक स्टेरोइड औषधि हो जुन यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी प्रभावहरूको लागि बिभिन्न प्रकारको भ्रामक अवस्थाहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
के डेक्सामेथासोन र प्रेडनिसोन एकै हो?
यद्यपि तिनीहरू समान छन्, तिनीहरू वास्तवमा उस्तै छैनन्। माथिको जानकारी दुई औषधि बीच एक उपयोगी तुलना हो। अन्य स्टेरोइड ड्रग्स जसमा तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ मेडरोल (methylprednisolone), प्रेडनिसलोन , र हाइड्रोकोर्टिसोन।
के डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोन राम्रो छ? / के डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोन भन्दा सुरक्षित छ?
दुई औषधीहरू सिधा तुलना गर्ने त्यहाँ धेरै डाटा छैन। अध्ययनको एक समीक्षा कुनै पनि औषधि दमको तीव्र उत्तेजनाका साथ बच्चाहरूको उपचारका लागि स्वीकार्य छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। किनभने त्यहाँ स्टेरोइड औषधि को उपयोग को लागी धेरै फरक संकेतहरु छन्, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ले तपाइँको मेडिकल ईतिहास र तपाईले लिने अन्य औषधी संगै उपचार भइरहेको अवस्था लाई ध्यानमा राख्नेछ, जब कुन औषधि तपाईको लागि उत्तम हो भनेर निर्णय गर्ने बेला।
सुरक्षाको सर्तमा, सबै स्टेरोइडसँग साइड इफेक्टको सम्भावना हुन्छ (चेतावनी खण्ड हेर्नुहोस्), र केहि गम्भीर हुन सक्छ। तपाईको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकले निर्णय लिनेछ कि कुन औषधि तपाईका लागि सुरक्षित छ र उपचारको सब भन्दा छोटो पाठ्यक्रम तोक्छ। प्राय: तपाई स्टेरोइडबाट टाईप गर्नुहुनेछ ताकि तपाई अचानक बन्द नहुनुहोस्। यसले तपाईंको एड्रेनल ग्रन्थिहरूलाई सामान्य प्रकार्यमा फर्कन मद्दत गर्दछ।
के म गर्भवती हुँदा डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोन प्रयोग गर्न सक्छु?
डेर्सामेथासोन वा प्रेडनिसोन जस्ता कोर्टिकोस्टेरोइडले धेरै प्रजातिहरूमा भ्रुणलाई हानी पुर्‍याएको देखाइएको छ जब कुनै व्यक्तिले लिने डोज बराबरको खुराक दिइयो भने पशुको वंशमा फाटो तालाब बढ्ने घटना हुन्छ। स्टेरोइडले पनि वृद्धि रोकावट र जन्म वजन घटाउन सक्छ। गर्भवती महिलाहरूमा डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोनको पर्याप्त, राम्रोसँग नियन्त्रण गरिएको अध्ययन गरिएको छैन। तसर्थ, डेक्सामेथासोन वा प्रेडनिसोन गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ यदि लाभ भ्रुणको लागि जोखिमलाई बढाउँदै जान्छ। गर्भावस्थामा स्टेरोइडको उच्च खुराक प्राप्त गर्ने आमाहरूमा जन्मेका शिशुहरूलाई hypoadrenalism को संकेतको रूपमा अवलोकन गर्नु पर्छ।
के म डेक्समेथासोन वा प्रेडनिसोन रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
सामान्यतया, रक्सीलाई स्टेरोइडसँग मिसाउनु हुँदैन। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के डेक्सामेथासोन कडा स्टेरोइड हो?
डेक्सामेथासोन लामो-अभिनय हो र छ एक शक्तिशाली, वा मजबूत, स्टेरोइड मानिन्छ । यो हाइड्रोकार्टिसोन भन्दा २ times गुणा बढी सामर्थ्यवान छ। डेक्सामेथासोनको प्रारम्भिक खुराक एक दिनको ०.7575 देखि mg मिग्रासम्म फरक पर्न सक्छ, उपचार गरिरहेको अवस्था अनुसार। खुराक आवश्यकताहरू फरक हुन्छन् र उपचार गरिएको उपचार र प्रतिक्रियाको आधारमा व्यक्तिगतकृत हुनुपर्दछ।
के प्रेडनिसोन र डेकाड्रन एकै हुन्?
प्रेडनिसोन र डेकाड्रन (डेक्सामेथासोन) दुबै स्टेरोइडहरू हुन्, जो विभिन्न प्रकारका भ्रामक र / वा स्वत: प्रतिरक्षा शर्तहरूमा प्रयोग गरिन्छ, तर केही भिन्नताहरू छन्, जसरी माथि वर्णन गरिए। उदाहरण को लागी, डेकाड्रन (डेक्सामेथासोन) प्रेडनिसोन भन्दा बढि शक्तिशाली र लामो-अभिनय हो।
योनि खमीर संक्रमण बाट कसरी छुटकारा पाउन
डेक्सामेथासोनले कति चाँडो काम गर्छ?
यो कसरी औषधि प्रशासित छ मा निर्भर गर्दछ। इंजेक्शनले दिएको हो, डेक्सामेथासोनले छिटो काम गर्न थाल्छ। एक ट्याब्लेटको रूपमा मुखले लिईएको, प्रभावहरू एक घण्टा देखि केहि घण्टा सम्म लिन सक्दछ।
चिसो कति लामो हुन्छ?
वालमार्टले नयाँ ओपिओइड प्रिस्क्रिप्शन नीति ल्याउछ
toenail कवक उपचार सिरका र हाइड्रोजन पेरोक्साइड
कब्जियत को लागी एक राम्रो घरेलु उपचार के हो